Ciidamada Booliska oo Xildhibaan hore ku xiray Magaalada Baydhabo | Dhacdo
Ciidamada Booliska oo Xildhibaan hore ku xiray Magaalada Baydhabo
Ex Xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf (Xasan Black) oo ka tirsanaa Baarlamaankii 1aad ee Koonfur Galbeed ayaa Sabtidii lagu xiray Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay.
Ex Xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf ayaa ka mid ahaa rakaab la socday diyaarad ka timid Magaalada Muqdisho, waxayse Ciidamada Booliska kala deggeen gaarigii uu la socday, mar uu marayay inta u dhaxeyso Garoonka Diyaaradaha Shaati-gaduud iyo Saldhigga Dhexe ee Baydhabo.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Booliska ay xoog ugala deggeen gaarigii uu watay, isagoo xilligaa ku sii jeeday hoygiisa Magaalada Baydhabo.
Maamulka Koonfur Galbeed iyo Saraakiisha Ciidamada ayaan weli ka hadlin waxa uu salka ku hayo xariga Ex Xildhibaan Xasan Black, waxaase la fahamsan yahay in muddooyinkii ugu dambeysay uu dhaliilayay siyaasadda Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen).
Xasan Black ayaa Magaalada Muqdisho uga qaybgalay shirar looga hadlayay tacadiyadii Ciidamada Booliska ka gaysteen Magaalada Baydhabo, bishii December ee sanadkii 2018, markaasoo dadweynaha reer Baydhabo ka gadoodeen qorshihii ay Dowladda Federaalka magaaladaasi uga soo xirtay Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo ka mid ahaa musharaxiintii u taagneyd xilka madaxtinimada ee Koonfur Galbeed.
Ciidamada Booliska ayaa qori caaradii ku wajahay dadweynihii dalbanayay in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Abuu Mansuur, waxayna xilligaa toogasho ku dileen dhowr iyo toban qof, oo aan hubeysnayn.
Mar sii horeysay Xasan Black ayaa Madaxweyne Lafta-gareen ku eedeeyay inuu ka gaabiyay arrimaha bani’aadanimada ee ka jira Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, ee ka dhashay go’doominta daran ee Shabaabku ku hayaan magaaladaaasi.
Muddada uu xafiiska jooggo Madaxweyne Lafta-gareen ayaa waxaa kordhay xariga Magaalada Baydhabo loogu gaysanayo Siyaasiyiinta, Wariye-yaasha iyo cid kastoo muujisa dhaliilaha ay leedahay Madaxtooyada Koonfur Galbeed. Waxaana xusid mudan in dad badan oo horaan mucaaraday siyaasadda Madaxweynaha laga celiyay Garoonka Shaati-gaduud.
Tan iyo markii uu xafiisku qabtay Madaxweyne Lafta-gareen ayaa waxaa uu gaabis ku yimid la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab ee ku sugan qaybo ka mida deegaanada Koonfur Galbeed, waana xilli ay taagan tahay go’doominta adag ay ku hayaan degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood, taasoo dad badani ku khasabtay in ay guryahoodii ka cararaan, isla-markaana ay door bideen inay barakacayaal ku noqdaan Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho.
Dadka saluugsan siyaasadda Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa kuu sheegaya in dagaalkii lagula jiray Shabaabka uu u weeciyay dhanka siyaasiyiinta iyo dadka kale ee aan la dhacsanayn maamulkiisa.